DHACDO NAXDIN LEH:- Wiil Somali-British ah oo lagu dilay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DHACDO NAXDIN LEH:- Wiil Somali-British ah oo lagu dilay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden (SAWIRO)
Wiil yar oo Somali-British ah islamarkaana lagu magacaabo Yuusuf Cabdi-waaxid Warsame ayaa habeenkii Isniinta ahayd lagu dilay Bam gacmeed xilli uu booqasho ku joogay gurri ku yaala magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad dalka Sweden.
Wiilkaan yar iyo qoyskiisa oo maalmo kahor soo gaaray magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa sida la sheegay ku noolaa magaalada Birminghum ee dalka UK, waxaana ay Sweden ku joogeen booqasho yar, balse ay arrintaasi ku dhacday.
Wiilkaasi oo markii hore dhaawac culus kasoo gaaray qaraxa ayaa markii dambe ku geeriyooday Isbitaalka, waxayna ciidanka booliska ee dalka Sweden ilaa iyo haatan wadaan baaritaano ku aadan ciddii falkaasi sida rasmiga ah uga dambeysay.
Inkastoo aysan jirin cid ilaa iyo haatan loo soo qab-qabtay falkaasi arxan darradda ah, ayaa hadane waxay booliska Sweden sheegayaan inay dhismahaasi ku noolaayeen shaqsiyaad dambiilayaal ah oo horey dilal u geystay, loona maleynaayo inay falkaasi iyaga ka dambeeyeen.
Bamkaasi ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen laba qof kale oo ku sugnaa gurigii Bamka lagu tuuray, inkastoo dhaawacooda uu yahay mid fudud.
Waalidka wiilkaan geeriyooday ayaa markoodii hore kasoo guuray dalka Holland sanadkii 2001-dii, waxayna usoo guureeen dalka UK, iyagoona kadib halkaasi ka furtay dukaan ganacsi ah oo lagu iibiyo raashinka iyo hilibka xalaalka ah (Tawfiq Halal Meat and Grocery Shop), inkastoo booqashada ay ku tageen dalka Sweden ay isku badashay booqasho murugo leh.